युगसम्बाद साप्ताहिक - इशाईकरणको अर्को अध्याय ‘गाई काण्ड’
Thursday, 05.28.2020, 02:37am (GMT+5.5) Home Contact
Tuesday, 03.27.2018, 12:18pm (GMT+5.5)
मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न आएको युरोपेली यूनियनको पर्यवेक्षण समूहले गत मंगलबार आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै निर्वाचन प्रतिनिधित्वमा खस–आर्य समुदायलाई दिइएको आरक्षण हटाउनुपर्ने कथित सुझाव दियो । यसको एउटै कारण थियो नेपालको मौलिक धर्म–संस्कृतिमाथिको प्रहार । नेपालमा इशाईकरण बढाउन हिन्दु धर्म–संस्कृति मास्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका युरोपियनले नेपाल एकीकरण अघिदेखि नै यो प्रयास थाल्दैआएको इतिहास छ । पृथ्वीनारायण शाहले पादरीहरू लखेटेको सन्दर्भदेखि एक दशकअघिको जनआन्दोलनपछि उनीहरूको सर्सराहटले नेपालमाथि धार्मिक अतिक्रमणको बीजले आकार लिएको हो । यसमा उनीहरूकोा लगानी र प्रशिक्षण निकै आलोच्य बनेको थियो र अहिले पनि बनिरहेको छ ।
युरोपेली यूनियनका पर्यवेक्षकको प्रतिवेदन आए लगत्तै गाई काट्ने कानुन बनाउने घोषणा गरेपछि यसको चर्को बिरोध भएको छ । गाई काट्ने कानुन बनाएर बजारमा खसी–कुखुरा काटेजस्तै गर्ने हो भने यो देशको अवस्था के होला ? गाईलाई देवताका रूपमा पूजा गर्नेहरूले त्यसलाई कसरी स्वीकार्लान् । विगतमा युरोपेली यूनियनको पैसामा जातीय आन्दोलन चर्केको कुरा कतिपय जातीय अगुवाहरूले नै स्वीकार गरेर अलग भए । आफूलाई नागरिक अगुवा ठान्नेहरूले पनि हात झिके । जातीय नारा घन्काउनेहरूको समूह कमजोर बन्दैगर्दा युरोपियन यूनियनले स्थितिरतातर्फ लम्किन लागेको देशमा जातीय विद्वेष पैदा गर्ने विषवमन ग¥यो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मानेको छ । राष्ट्रिय जनावरको बध गरिंदैन, गरे कारबाही हुन्छ । तर नेपालमा यस्तै भैरहेको छ र संविधानले निषेध गरेको कुरा गर्न पाउनु आफ्नो अधिकार भएको भ्रम फैलाइएको छ । जनआन्दोलन २०६२।०६३ को सफलतापश्चात गौबधको शृङ्खला बढ्दै गएको थियो । विशेषतः नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको घोषणा गरिएपछि यो क्रम बढे पनि अन्तरिम संविधान र संविधानसभाले बनाएको संविधानले गाईलाई राष्ट्रिय जनाबर मानेपछि यसमा केही कमी आए पनि यस्ता घटना निमिट्यान्न भएका छैनन् । अहिले निर्वाचन सम्पन्न भएर संविधान कार्यान्वयनको दिशामा उन्मूख भएको र मुलुक समृद्धिको दिशातिर जाने आशा बढिरहेका बेला पश्चिमाको यो विषवमन नेपाललाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने षड्यन्त्र बाहेक केही हैन ।
हुन त नेपालमा गाईको मासु खानेहरू नभएका हैनन्, विभिन्न जातजातिले गाई खान्छन् । तर आजभोलि गाई कटेर विक्री नै गर्न पाउनुपर्ने शैलीका अभिव्यक्ति आएका छन् र यसलाई आफ्नो अधिकार भन्ने गरेका छन् । यसो भन्दैमा संविधानले निषेध गरेको कुरा गर्नु अपराध हो, गैरकानुनी हो । राष्ट्रिय जनावर गाई काटेर खान पाउनुपर्छ भन्नु संविधान विपरीतको काम हो ।
धार्मिक मान्यताका आधारमा गाईलाई हिन्दु धर्मावलम्बीहरूले लक्ष्मीको रूपमा पूजा गर्ने गर्दछन् । यसको अर्थ गैरहिन्दुहरूले धर्म निरपेक्षताकै आधारमा अरूको आस्थामा प्रहार गर्नु नै अधिकार स्थापित गर्नु हो भन्ने मान्यता राख्ने हो भने मुलुकमा कहिल्यै सहिष्णुता कायम रहँदैन । यो बडो गम्भीर र विचारणीय पक्ष हो । जातीय राजनीतिका पक्षपोषकहरू गाई मारेर खान पाउनुपर्छ भन्दै आइरहेका छन् । कतिपयको संस्कृति र परम्परामा त्यो छुट छ तर यसो भन्दैमा संविधानले निषेध गरेको कुरा किन गर्ने ? कतिपय समुदायमा बहुपती प्रथा छ । के यो उनीहरूको अधिकार हो भनेर बहुपती वा बहुपत्नीप्रथालाई कानुनी मान्यता दिन सकिन्छ ? गाई काट्ने कानुन पनि त्यस्तै हो ।
पछिल्लो समय मुलुकका विभिन्न भेगमा गाई मारेर खाएको अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गर्ने गरेको छ । यसलाई लिएर जातीय नेता वा संगठनका अगुवाहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन् । खानेले खालान्, पूज्नेले पुज्लान् तर राष्ट्रिय जनावर भैसकेपछि त्यसलाई काटेर खानु अपराध हो भन्ने चाहिं बुझ्नुपर्छ । गाई काटेर खानेलाई पक्राउ गरेको कुनै जातको वा धर्म विशेषको पक्षपोषण गरेको नभै संविधानले निषेध गरेकोमा हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
यहाँ महत्वपूर्ण कुरा के छ भने राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा दलीय स्वार्थपूर्तिमा अघि बढ्ने र विदेशीको इशारामा चल्ने गर्दा मुलकका सम्वेदनशील विषयहरूमा गम्भीर आघात पुगेको कुरा कामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । विगतमा जातीय पहिचानसहितको संघीयता, एक मधेश एक प्रदेश जस्ता उग्र जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी नारा लगाउनेहरूले नै प्रचलित मूल्य–मान्यताबिरूद्ध विषवमन गरे विदेशीको पैसामा ।
गाईलाई हिन्दुहरूले लक्ष्मीको रूपमा मानेर किन पूजा गरे भन्ने विषय निकै महत्वपूर्ण छ । भन्नेले तिमीहरू गाईको मुत खाओ, हामी मासु खान्छौं भन्दैछन् । यो आक्रोश बाहेक केही हैन । गाईको शरीरबाट निसृत हुने हरेक कुरा मानव र प्रकृतिका लागि लाभदायक छ । दूधको त कुरै नगरौं– गहुँतमा यति ठूलो औषधीय शक्ति हुन्छ कि हामीले गाईको मासु खाने कि दूध मुत्रसेवन गर्न भन्ने यसपछि सोच्नैपर्छ ।
गोमुत्रमा रोगव्याधी हटाउने शक्ति हुन्छ भनेर पश्चिमी देशका वैज्ञानिकहरूले नै भनिरहेका छन् । गौमुत्र सर्वोत्तम औषधीको रूपमा लिइन्छ । यसको सेवनले कतिपय रोग समेत निर्मूल हुन्छ । यद्यपी स्वस्थ्य गाईको गौमुत्र सेवन गर्नुपर्छ । स्थानिय जातका गाई अझ खुला चरनमा छाडिने गाईको गौमुत्र, दूध बढी औषधिय महत्वको हुन्छ ।
गौमुत्रले क्यान्सर जस्ता रोग लाग्न दिदैन । चिकित्सा विज्ञान अनुसार गाईको कलेजोलाई चार भागमा बाडिन्छ । यसको अन्तिम हिस्सामा एक प्रकारको एसिड हुन्छ, जो क्यान्सर रोगको जड हटाउने क्षमता राख्छ । गौमूत्र खाली पेट प्रतिदिन निश्चित मात्रामा सेवन गर्दा क्यान्सर जस्तो रोग नष्ट हुन्छ । त्यस्तै दूध दुइरहेको समयमा गौमुत्रमा ल्याक्टोजको मात्रा वृद्धि हुन्छ, जो हृदय रोगीको लागि फाइदाजनक मानिन्छ ।
त्यस्तै गोमूत्रबाट बनेको औषधीले क्यान्सर, उच्च रक्तचाप, आर्थराइटिस, सर्वाकल हड्डी सम्बन्धी रोगको समेत उपचार सम्भव हुन्छ । यसै कारण गाईलाई नेपालको राष्ट्रिय जनावर मानिएको हो । पौराणिककालदेखि गाईलाई त्यसै पूजा गरिएको हैन रहेन । ऋषिमुनिहरूले हजारौंहजार वर्षअघि पत्ता लगाएको कुरा आज विज्ञानले पुष्टि गरिसक्यो । हामी किन गाईका विषयमा अनेक विवाद निकालेर राष्ट्रिय एकतालाई भत्काउन लागिपर्ने ? वैदिक धर्म, संस्कृति नेपालको हो, कुनै जान विशेषको हैन । यसले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त मानवजातिका लागि हो ।
तर, समयले विस्तारै कोल्टे फेर्दै गरेको र जातीय मुद्दा मत्थर हुँदै राष्ट्रिय बहसमा देश दौडनै लाग्दा युरोपियन यूनियनले जसरी विष घोल्ने काम ग¥यो, यो घोर आपत्तिजनक छ । सरकारले आपत्ति जनायो, तर उसले दम्भ देखाउँदै प्रतिवेदन नसच्याउने घोषणा ग¥यो । अनि उनीहरूले दिएको प्रतिवेदनप्रति जातजातिको राजनीति गर्नेहरूले यसको भव्य स्वागत गरे । एउटा जात–सम्प्रदायलाई खुम्च्याएर अर्को माथि उठ्दैन भन्ने उनीहरूले हेक्कै राखेका छैनन् । हिजोको सामाजिक वनावट हेरे मात्रै पनि नेपाली संस्कार र संस्कृति झल्कन्छ । कसरी मिलेको थियो समाज र कति सहयोगी थियो भन्ने ? तर आज, विद्वेषको विष फैलाइएका छन् विदेशीले अनि हामी त्यसैको पछि लागेर निषेधको राजनीतिमा उद्यत छौं ।